SONATA-CANTATA: အချစ်များဖြင့် ခရီးသွားခြင်း
အဲဒီနေရာတွေ အကုန်လုံးကို လျှောက်လည်ဘူးတယ်.... သတိရလိုက်တာ အခွင့်သင့်ရင် ထပ်သွားဦးမယ်....
ပြောလို့ ပြောတာ မဟုတ်ဖူး..
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ၉ဂဏန်းလဲ ဖြစ်ပြန်တယ်..။
ပုံတွေ အားလုံးလိုလို လှပါတယ်..။
ပျော်ရွှင်သော စိတ်နှလုံးနဲ့ ရေးတဲ့ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး အပျော်တွေ ကူးစက်သွားတယ် မသီတာ..၊ ဘယ်နှစ်ခါ ကြည့်ကြည့် မရိုးနိုင်တဲ့ နေရာတွေပါပဲ..၊ ကောင်းမှုတော်က ဇီးကွက်ရုပ်လေးတွေလည်း သဘောကျတယ်၊
May I know the location of train crossing please ? Thank you.
မန္တလေးမှ သာစည်သို့ အသွား လမ်းတနေရာပါ။
ရှမ်းပြည်ဘက်ကို ခရီးထွက်ချင်သေးတယ် မသီတာရေ။
ထသွားချင်စိတ်ပေါ်လာပြီ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?း))
ဖတ်သူများလည်း ပျော်ရွှင်သောစိတ်နှလုံးဖြစ်မိပါတယ်း)
မိသားစုအလည်သွားရတာလောက် ပျော်စရာကောင်းတာမရှိဘူးဗျာ.. :D
ရောက်ခဲ့တဲ့ နေရာတွေ စုံလိုက်တာ.
ရှုခင်းတွေ လှတယ်။ ဘဝသံသရာရထားဖြတ်တဲ့ ဂုတ်ထိပ်တံတားလည်းလှတယ်။
ခရီးသွားရတာ စိတ်ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ဖို့ ကောင်းတယ်နော်။။
ဖတ်ရုံနဲ့တင် အရမ်းပျော်ခဲ့မှန်း သိသာပါ့တော်း)))
It is so true saying that " Home is Where the Heart is".
ကျွန်မလည်း တကယ်ချစ်ပါတယ်း) ဓါတ်ပုံလေးတွေ တအားလှတယ်။
ဦးဇင်းတို့ ပင်းတယကိုလဲ ရောက်ခဲ့တာပဲ..။ ပျော်ခဲ့သလားတော့မသိပါဘူး..။ဓာတ်ပုံတွေက အရမ်းသေးနေသလိုပဲ.. အကြီးဆိုက်လေးတင်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်..။
ပုံကို click ရင်... ပုံအကြီးပေါ်လာပါမယ် ဘုရား...။
ချစ်တယ်၊ ချစ်တယ်... အရမ်းချစ်တယ်၊ ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် ချစ်နေတာ အသွေးထဲ အသားထဲကပဲ မမရေ။
ဇွန်က ဒီတစ်ခေါက် ကျောက်ကွင်း၊ မန်းလေးနဲ့ မေမြို့ပဲ ရောက်ခဲ့တယ်။ တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးသေးတဲ့ တောင်ကြီး၊ အင်းလေး၊ ပုဂံတော့ နောက်အခေါက်လို့ အားခဲထားတယ်။
သားတို့ ကရေကရာ ကြိုက်ကြလား၊ ဇွန်တော့ သိပ်ကြိုက်။ :D
ပုံလေးတွေ လှတယ် မမ။ :)
အသောလုံးလေး နဲ့ ။း)
သီချင်း ကို ကြားထဲက..လာညင်းပေးလို့..ကျေးဇူး အထူးတင်ရပါအိ။း)
သောက်ရေကန်ရယ် နေ၀င်တဲ့ပုံလေးရယ် အလွန်နှစ်သက်ပါသည်။